Zelda maTatoo, akawanda mikana senge rupees muhuswa | Kunyora
Hei! Teerera! Nhasi takagadzirira chinyorwa nezve ma tatoo Zelda! Saka verenga chinyorwa ichi kuti chigadzirire, ivo vanoti zvine njodzi kuenda wega.
1 Chii chinonzi Ngano yaZelda?
2 Zelda nyora, chii chatinogona kukurudzirwa nacho?
Chii chinonzi Ngano yaZelda?
Kutanga kwesaga kwakatanga neyekutanga Nintendo koni, iyo NES, muna 1986. Batanidza, kwete Zelda, aifanira kununura Princess Zelda, ikozvino hongu, kubva mukubata kweiyo yakaipa Ganon. Asi pane izvi aifanira kutora zvidimbu zvisere umo Zelda akapatsanura Triforce yeUchenjeri zvekuti Ganon haana kuitora.
Uye iyi, zvimwe kana zvishoma, inyaya inozvidzokorora mumitambo mizhinji (mimwe, saMajora Mask, tora mumwe mutsara): Ganon anoedza kutora Triforce kukunda nyika, uye Zelda naLink vanoedza kuzvidzivirira. Zvinogona kutaridza senge zano rakareruka, asi zvinonyatsoteera hwaro hwenyaya dzese dzemagamba dzinotaurwa naJoseph Campbell Iyo gamba ine chiuru kumeso. Pamwe ndosaka nekudzokorora chirongwa chatakatemerwa tese mukati, saga vhidhiyo saga inokwanisa kutiteya zvakanyanya (uye zvoitika kutiyedza nemitambo, matoyi, makonzati ...).
Zelda nyora, chii chatinogona kukurudzirwa nacho?
Pano une sarudzo dzekumisa mota. Kubva pane chinongedzo, Zelda, Ganon kana mumwe munhu, saiye mambo, wekutakura waunoda (ini ndinotakura imwe yeLink's Yekumutsa Batanidza). Iwe unogona zvakare kuzvimisikidza pachako pachinhu, senge tenzi pfumo kana iyo Triforce. Kana pamwe unganidza iyo Triforce nechiso cheumwe neumwe hunhu (ivo vanoti chidimbu chimwe nechimwe cheTriforce chakabatana nehunhu).
Tora mukana wekupa iyo inobata ruvara, ivo vanotaridzika kunge vakanaka nezvidimbu zvinoenderana nemitambo yemavhidhiyo iyi!
Uye kusvika zvino chinyorwa chanhasi. Uri kuronga kuwana Zelda nyora here? Une imwe here? Siya mameseji ako nemaonero munzvimbo yemashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Zelda maTatoo, akawanda mikana senge rupees muhuswa
Tattoo makosi ekuziva maitiro ekuve tattoo tattoo